‘मान्छे त हामी कांग्रेसी हौं, भोट चाहिँ तपाईंलाई है, राम्रो गर्नु’ – Everest Dainik – News from Nepal
‘मान्छे त हामी कांग्रेसी हौं, भोट चाहिँ तपाईंलाई है, राम्रो गर्नु’
कांग्रेसका समर्थकहरुका लागि पनि प्रचण्ड नै प्रिय उम्मेदवार
गोकर्ण भट्ट, शिवनगर, चितवन ।
सूर्य र हँसिया हतौडा बोकेको एउटा मोटरसाइकल आफ्नो आँगन अगाडिबाट कुदेको देख्दा उनी दौडेर सडकमा निस्किन । आँगनको डीलमा लहरै ढक्कमक्क भएका फूलहरु, उनले एक गूच्छा फूल बनाइन र हेरिन् पूर्वतर्फ बाटोमा । पछाडि प्रहरीको गाडी र त्यसपछि स्कार्पियोको पछाडि उभिएका उम्मेदवारहरु ।
गाडी नजिकै आउँदै थियो । उनीसँगै घरका दुई तीन जना अरुको उत्सकुता समेत बढ्दै थियो ।
उनको आँगनछेउको सडकनेर गाडी पुग्नै लाग्दा उनले जोडले भनिन्, ‘रोक्नु रोक्नु, हाम्रा नि कुरा छन् ।’ यो दृश्य थियो चितवन महानगरपालिकाको वडा नं. ८ को ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका लागि चितवनको क्षेत्र नं. ३ बाट उम्मेदवार बनेका प्रचण्डको गाडी रोकियो ।
‘मान्छे त हामी कांग्रेसी हम् क्यारे । तर यसअघि रेणु जीलाई जिताईयो, अहिले भोट तपाईलाई ।’ उमेरले ४० पुगेकी महिलाले एक सासले भन्न भ्याइन, ‘अब यतैको हो तपाई पनि, बुझ्नु भा छ सबै कुरा, राम्रो गर्नु होला ।’
चितवन क्षेत्र नं. ३, चुनावमा मुख्य दुई प्रतिष्पर्धि । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र राप्रपा प्रजातान्त्रिकका उपाध्यक्ष बिक्रम पाण्डे । नेपाली कांग्रेसको यो क्षेत्रमा उम्मेदवार छैन । कांग्रेसले पाण्डेलाई समर्थन गरेको छ । र, यी त्यही कांग्रेस हुन, जसले तीन महिना अघि मात्रै माओवादी केन्द्रबाट मेयर पदमा उम्मेदवार रेणु दाहाललाई भोट दिए, प्रचार गरे ।
अहिले समय फेरिएको छ । हिजो एमालेसँग तिक्तताको इतिहास अन्त्य भएको छ । एमाले र माओवादीले संयुक्त प्रचार सुरु गरेका छन् । यसको समस्या परेको छ कांग्रेसका समर्थकहरुलाई ।
प्रचण्डले सार्वजनिक सभामा भने झैं अहिले स्थानीय कांग्रेसलाई केन्द्रको निर्णयले पीडा थपेको छ । माओवादी र एमालेबीचको साइनो बलियो हुँदै गएपनि कांग्रेसका समर्थकहरुका लागि प्रचण्ड नै प्रिय उम्मेदवार हुन । पार्टीले भने राप्रपालाई भोट हाल्न उर्दी जारी गरेको छ । तर चितवनका गाउँ बस्ती डुल्दा पार्टीको यो उर्दीले अर्थ राख्ने भने देखिँदैन ।
चितवन महानगरपालिका केही वडाहरुमा नेपाली कांग्रेसको बलियो पकड रहेको छ ।
कांग्रेसका प्रदेश तर्फबाट उम्मेदवार बनेका दिनेश कोइराला बलियो प्रभाव राख्ने नेतामा पर्छन् । तर प्रतिनिधि सभाको कुरा आउँदा भने कांग्रेसीहरुका लागि बिक्रम पाण्डे भन्दा प्रचण्ड नै रोजाइमा परेका छन् । माओवादीले एमालेसँग एकताको निर्णय गरेपनि जिल्लाको विकासका लागि पाण्डे भन्दा प्रचण्ड नै भरपर्दो देखिने धारणा उनीहरुले राख्छन् । त्यसैले कतिपय स्थानमा घरमा कांग्रेसको झण्डा फहराएको देखिएपनि उनीहरु बाटोमा निस्किन्छन्, फूलको गुच्छा लिएर प्रचण्डलाई स्वागत गर्न ।
प्रचण्डको घरदैलो टोली गाउँ भ्रमणमा रहेका बेला कतिपय स्थानमा गाउँलेहरुले बाटोमा गाडी रोकेर अग्रीम आशिर्वाद नै दिइरहेका छन् । यी आर्शीवाद दिनेहरु माओवादी समर्थक होइनन । स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीले निकै कम मत ल्याएका गाउँहरुमा समेत प्रचण्डप्रतिको आकर्षण बेग्लै देखिन्छ ।
मानिसहरुका लागि सबैभन्दा मुख्य समस्या बाटोको छ, नदी कटानको छ, सुकुम्बासी समस्याको छ । जंगली जनावर र लालपुर्जाको छ । शहरी क्षेत्रमा भने स्कूल, रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योगलगायतको समस्इा छ । उनीहरुलाई लाग्छ, ‘राष्ट्रिय नेता हुन प्रचण्ड, यिनले भनेको चल्छ । यिनले चाहे भने गर्न सक्छन् ।’
त्यही भएर कतिपय स्थानमा उनीहरुले शर्त समेत तेस्र्याउँछन् तर नरम भाषामा । ‘धुलो खानु भा’छ, हाम्रो पीडा बुझ्नु भा होला नि, हामी त दैनिक यस्तै हो धुलोसँग ।’ मंगलपुरदेखि रामपुरहुँदै शारदानगरतर्फ जाँदा अधिकांश जनताहरुको भनाई यही थियो । प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा शुरुमैं भने, ‘धुलोले सास्ती झेल्नुपर्ने रहेछ । स्थायी सरकार बनेको पहिलो वर्षको प्राथमिकता सबै बाटो पिच गर्ने ।’
नेपाली कांग्रेस केन्द्रले राप्रपा प्रजातान्त्रिकका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि खुलेर प्रचण्डको प्रचारमा लाग्न नसकेपनि गाउँघरतिर प्रचण्ड पुग्दा भने उनीहरु छेउ लागेर भएपनि भेटन खोज्छन् । कतिपयले समय या परिस्थिति मिलाएर घरमा नै आउन अनुरोध गर्छन् ।
अवस्था हेर्दा, प्रचण्डका पक्षमा आम जनताको मत देखिएको छ । कसरत त राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता, निर्माण व्यवसायी तथा वनमन्त्री बिक्रम पाण्डेले पनि निकै गरेका छन् । तर स्थानीय मनोभावले राष्ट्रिय नेता खोजेकोले पाण्डेको अवस्था खासै राम्रो देखिन्न । कांग्रेसका सक्रिय कार्यकर्ता र आम मतदाताका लागि पार्टी भन्दा स्थानीयताले प्रमुखता पाएको छ ।
ट्याग्स: cm prachand, gokarna bhatta, Left Unity